सिटौलाको भेलामा किन गएनन् गगन र प्रदीप ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
सिटौलाको भेलामा किन गएनन् गगन र प्रदीप ?
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट नेता कार्यकर्ताहरू महाधिवेशन केन्द्रित रणनीति बनाउन जुटेका छन्। काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा सिटौला निकट नेताहरुबीच अहिले छलफल भइरहेको छ।
भेलामा सिटौलासहित नेताहरू उमाकान्त चौधरी, शिव हुमागाई, भीमसेन दास प्रधानलगायत उपस्थित छन्। त्यस्तै उनी निकटका अन्य नेता, भ्रातृसंस्थाका पदाधिकारीहरू पनि छन्। तर, सिटौला समूहका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेल भने भेलामा सहभागी छैनन्।
थापा पोखरामा रहेका कारण भेलामा उपस्थित नभएको बताइएको छ। उनी काँग्रेसका पूर्वआमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रामजी कुँवरको निधनपछि परिवारसँग भेटघाट गर्न पोखरा गएका हुन्। यता पौडेल भने क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काममा व्यस्त भएका कारण भेलामा उपस्थित नभएको बताइएको छ। यसअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भेला यी दुवै युवा नेता सहभागी भएका थिए।
सिटौला समूहको भेला तल्ला तहका अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए। ‘तल्ला तहका अधिवेशन सुरु हुँदैछन्। त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ,’ ती नेताले भने। १३ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा लडेका सिटौला आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो दाबीका बारेमा भने मौन छन्।